FANOMANANA NY FIFIDIANANA : Efa hadiva hifarana ny fandrafetana ny lalàm-pifidianana
Niteraka resabe ary niteraka tsikera tsy nifankahitana teto amin’ny firenena ny fitarazohan’ny famoahan’ny governemanta ilay volavolan-dalàna natao hifehy ny fifidianana amin’ity taona ity. 13 février 2018
Na ireo antoko politika na ny fiarahamonim-pirenena, eny fa hatramin’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana aza dia samy nanindry mafy ary nangataka ny tokony hamoahana faran’izay haingana an’io lalàna io.
Afak’omaly, nilaza indray ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana fa efa eo am-pamaranana tanteraka ny fandrafetana sy ny fandinihana ireo andininy sasantsasany ao anatin’ity lalàm-pifidianana ity izy ireo amin’izao fotoana izao ary aorian’izay dia hisy avy hatrany ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana eny anivon’ireo antenimiera mpanao lalàna. Ambetin-teniny hatrany fa tsy matory andro, tsy matory alina ireo mpikambana ao anatin’ny governemanta tarihany amin’ny fandinihana izany.
Nambarany fa noezahina notazomina avokoa ny soson-kevitra naroson’ireo antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena nandritra ireny fakan-kevitra ireny. Samy miandrandra mafy sy te ahafahantatra izay voarakitra ao anatin’ity lalàna ity avokoa ny rehetra amin’izao fotoana izao, ary indrindra miandry ny fotoana hivoahan’izany amin’ny fomba ofisialy.